Guam Garden Villa Ibhedi kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Guam Garden Villa Ibhedi kunye nesidlo sakusasa
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPaul
Sinikezela ngaphezu kokulala nesidlo sakusasa... ezilungiselelwe ngokucokisekileyo iindawo zokuhlala kunye neendawo zokutyela kunye neepatiyo kunye namabala egadi. Imithi yeziqhamo engaqhelekanga, enjengeemango, iibhanana, ijackfruits, incindi emuncu, iziqhamo zesonka kunye nemithi yekhokhonathi ikungqongile.
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela simahla kwiindawo zokuhlala kunye neendawo zokutyela kunye neepatio kunye namabala egadi. Imithi yeziqhamo engaqhelekanga, enjengeemango, iibhanana, ijackfruits, incindi emuncu, iziqhamo zesonka kunye nemithi yekhokhonathi ikungqongile. Kuhlala kukho iti eshushu okanye ikofu ekhoyo kunye neziphungo ezibandayo.
Isidlo sakusasa, esibandakanyiweyo kumaxabiso egumbi, sibonelela ngeendwendwe ithuba lokudibana nabahambi, amabali okurhweba kunye nokwabelana ngee-adventures.
Isidlo sakusasa selizwekazi siyanikezelwa (ijusi, ikofu okanye iti kunye neepastries okanye i-toast).
Ngena (ngesi-3pm) kwaye ujonge amaxesha (12:00 emini) kufuneka ajongwe kwaye umnxeba kummkeli wakho ukuba ukufika kwakho kuya kulibaziseka kuyacetyiswa.
4.73 · Izimvo eziyi-16
Indawo ezolileyo esecaleni kwesikolo samabanga aphantsi kudala.